Dalal loolan xoogan ugu jira arrimaha Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo ku dhex dhumay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dalal loolan xoogan ugu jira arrimaha Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo ku dhex dhumay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la xaqiijiyay inuu haatan ku dhex jiro loolankii ugu weynaa ee u dhaxeeya dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya.
Loolankaan oo si xoog leh u socda ayuu madaxweyne Farmaajo dareemay saacado kadib markii la doortay, waxaana ugu weyn shan dal oo isku heysta in mid waliba uu noqdo kan saameynta ku leh arrimaha Soomaaliya.
Dalka Sacuudiga ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee la soo xiriiray madaxweyne Farmaajo, waxaana Muqdisho isla arrintaasi ugu sugnaa safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geele, wuxuuna xiriirkaas keenay inuu boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/casiis telefoon kula soo hadlo Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa durba ku saamoobay yabooha iyo hadaladda boqorka Sacuudiga isagoo ka dhigi doona dalka ugu horeeya ee uu booqan doonno, safarkaas oo cumro loogu magac daray waxaa ku dhex jira la-kulanka boqorka Sacuudiga oo laga filaayo taageero dhaqaale iyo kaalmo uu ka geysto abaaraha.
Dalka Itoobiya oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee saameynta ku leh Soomaaliya, isla markaana ku fashilantay ololihii ay u galeen in dib loo doorto Xasan Sheekh waxay ka gaabsatay madaxweynaha cusub iyadoo dusha kala socota dhaq-dhaqaaqiisa, waxayna shaki weyn ka qabtaa madaxweynaha lagu doortay naceybka Itoobiya iyadoo u muuqata inay taageeradeeda u weecin doona maamul goboleadyada.
Sidoo kale, dowladda Masar ayaa si aan hore loo arag ugu soo deg-degtay xiriirka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxayna noqotay dowladda kaliya ee wafdi gaar ah u soo dirtay Muqdisho, si ay ula kulmaan Farmaajo.
Madaxeyne C/fataax Siisii ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ka dhex arkay fursad uu cadaadis ku saari karo Itoobiya oo ay isku hayaan biyo xireenka weyn ee Itoobiya ku leexsatay biyihii webiga Nile.
Dalka Turkiga ayaa si taxadir leh uga fiirsanaya siyaasadda madaxweynaha cusub, mana jirin xamaasad weyn oo ay u muujiyeen doorashadii Farmaajo inkastoo safiirkooda Muqdisho uu la kulmay Madaxweynaha, isla markaana madaxweyne Ordogan xiriir telefoon lasoo sameeyay madaxweynaha cusub, haddana Turkigu ma jecleyn isbedel keena in masaalixdiisa Geeska Afrika shaki geliso.
Ugu dambeyntii, dalka Imaaraadka Carabta ayaa ah salka ugu weyn ee madax xanuunka ku haya madaxweyne Farmaajo. Heshiiskii saldhigga milateri looga siiyay magaalada Berbera iyo galaangalka ay ku leedahay maamulada dalka waxay Farmaajo ku keeni kartaa in la naafeeyo awoooda dowladiisa, waxaana laga dareemay inaysan taageero badan u heynin madaxweynaha cusub.
Si kastaba ha ahaatee, socdaalka madaxweynaha Farmaajo ee todobaadka dambe ku tagaayo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa la dhihi karaa waa mid tusaale u ah sida ay u adag tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee ku xeeran Soomaaliya iyo loolanka dalalka daneeya arrimaheed oo u baahan in lagu maareeyo miisaan iyo xikmad, taasoo la’aanteed Soomaaliya ka dhigi karta dal danno shisheeye ku dhex luma.